10 Astaamood Oo Lagu Garto Macalinka Wanaagsan Ee Soo Saara Arday Mustaqbal Leh – dhugasho
haddisabdi Janaayo 9, 2017 waxbarasho
Ku dhowaad toban gu’ oo aad tamaashiirta sidataa, sida aan qabo, waayo-aragnimo way kuugu filan tahay. Ubaxa aad cilmiga ku habto, hor jooggooda waa lagu jimidh yaraadaa
Waa mid takhasus u leh laan-aqooneedda uu dhigayo.
Wuxu u tababaran yahay sida loo gubiyo aqoonta.
Waa mid dabeecad wanaagsan oo furfuran.
Waa mid ardayda dhexdooda u caddaalad fala.
Firficoonidu isagay ka bilaabantaa.
Maaha keligii taliye ay ad-adkaanta ugu baxdo, ardayduna qallafsanaanta ka barato.
Wuxuu leeyahay awood uu ku hanto dareenka iyo qalbiyada ardayda.
Wuxu dhaxanta ka duuliyaa ardayda marka ay caajis dareemaan.
Waa mid ka fogaada erayo faan iyo isla wayni ka muuqato.
Ku dhac ayaa u leeyahay su’aashaa ma garanayo, waan soo baadhi doona idina sidoo kale.
Waa cinjir laablaabmi kara, la dhaqmi kara oo wax fahamsiin kara arday kala awood faham iyo adkeysi duwan, kala dabeecad iyo dulqaan fiican, kala han iyo hayn gadisan.
Wuxu la socdaa xaalada iyo dareenada nafsadeed ee dhalinta wiilal iyo gabdhaba leh.